Il Divino the Divine - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Il Divino the Divine
Vatam-bato marbra tokana no nesorina tamin'ny vatokara vato tany Carrara, Tuscany, Italia, sahabo ho 30 metatra ny halavany ary milanja tokony ho 30 taonina. Ny sakana lehibe dia nampitondraina sambo ho any Florence, toerana nanendrena ilay mpanao sary sokitra Agostino di Duccio hanamboatra sarin'ilay maherifo ara-baiboly David avy ao aminy. Nanomboka nanisy sary sokitra ny tongony sy ny tongony ilay mpanao sary sokitra, saingy nilaozany sarotra loatra ilay tetik'asa rehefa nahita lesoka tamin'ny marbra izy. Navela notsaboina nandritra ny 12 taona ilay sakana talohan'ny nahatongavan'ilay mpanao sary sokitra hafa, Antonio Rossellino. Saingy hitany koa fa sarotra loatra ny miasa ary nafoiny ho zavatra tsy misy dikany. Ny fitsapana natao taty aoriana dia nanondro fa ny marbra dia manana kalitao antonony ary misy lavaka mikraobazy sy lalan-drà izay mety hanimba ny fiorenan'ny sarivongana goavambe. Ny bara marbra namboamboarina saro-bahana dia nilaozana ary naseho tamin'ny singa nandritra ny 25 taona talohan'ny nanendrena ilay manam-pahaizana Michelangelo handray andraikitra hamita ilay asa. Michelangelo dia afaka nandingana na nanala ny lesoka mba hamoronana izay ekena ho sangan'asan'ny sary sokitra Renaissance.
Ny fahitan'i Michelangelo ilay sary vongana dia ny fiezahany hanafaka ilay olona teraka tao an-dohany tsy ho azon'ny sisin'ny marbra. Saingy ity sarivongana ity dia mety hanana zavatra betsaka hatolotra noho ny fahitana azy. Ny sary sokitra David dia asa kanto amin'ny fisehoana ivelany, saingy misy lesoka sy tsy fahatomombanana anatiny ao anaty ny endriny, toy ny nataon'i David ara-Baiboly ihany koa fa nisy lesoka tamin'ny toetrany. Tsy irery i David amin'io lafiny io. Isika rehetra dia manana lafiny tsara, toetra ratsy, tanjaka, fahalemena ary tsy fahalavorariana ao amintsika.
Nandritra ny androm-piainany, i Michelangelo dia nantsoina matetika hoe "Il Divino", "The Divine", noho ny talentany sy ny fahaizany. Ny Paska dia manana hafatra avy amin’Andriamanitra iray hafa, hafatra mitondra fanantenana ho antsika rehetra ankehitriny sy amin’ny ho avy: “Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika” (Romana). 5,8).
Afaka manatona an'Andriamanitra tahaka ny tenanao ianao, amin'ny maha mpanota anao, fa tsy amin'ny tokony ho izy. Tsy ho very na holavina ianao. Tsy ho voatosika ho sarotra loatra ianao na hoheverina ho zavatra tsy misy dikany noho ny kileman-toetranao manokana. Fantatr'Andriamanitra ny tena toetrantsika, ary naneho fitiavana tsy manam-petra ho antsika tsirairay sy ny olona rehetra manerantany. Ny fitiavana dia mitaky famelan-keloka, tsy afaka mibebaka izay nataontsika taloha isika, fa ny heloka kosa dia voavela. Hitan'Andriamanitra mihoatra ny hadisoantsika izay mety hahatongavantsika miaraka amin'ny fanampiany.
"Fa Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho ao aminy ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra."2. Korintiana 5,21).
Angamba amin'ity fialantsasatry ny Paka ho avy ity dia afaka miala sasatra amin'ny fiainanao be atao ianao ary maka fotoana hisaintsainana ny tena dikan'ny Paska. Jesosy dia nanafaka ny kilemanao rehetra tamin'ny fiainanao tamin'ny alàlan'ny sorompanavotany mba hahafahanao mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ho sangan'asa amin'ny fahamarinany ary hiara-miaina aminy mandrakizay.